မှေးပွီး ၄၅ ရကျ ရှောငျခိုငျးတာ.မထိနျးနိုငျတဲံ ယောကျြားကွောငျ့ မိနျးမ ခဗြာ…သရေရှာပွီ… – Daily Feed MM
Admin_John | June 10, 2020 | Local News, News | No Comments
ကလေးမှေးပွီးရငျ ၄၅ ရကျတိတိ ယောကျြားနဲ့ မနနေဲ့ဒါက ကလေးမှေးပွီးစ အမြိုးသမီးတှကေို မှာနကေစြကားပေါ့ !!!“ယောကျြားဖွဈရတာ ကံကောငျးပါတယျ”
‘ကလေးမှေးပွီးရငျ ၄၅ ရကျတိတိ ယောကျြားနဲ့ မနနေဲ့’ ဒါက ကလေးမှေးပွီးစ အမြိုးသမီးတှကေို မှာနကေစြကားပေါ့။အဲဒီအခြိနျအတှငျးမှာ အမြိုးသမီးကို အနားပေးထားတယျ။အငျမတနျမှကို ပငျပနျးခကျခဲတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျ၊ ကလေးမှေးဖှားမှုကို လုပျဆောငျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ အားပွနျမှေးရတဲ့ကာလကိုး။သူ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျရတယျ။ အာဟာရပွညျ့ဝအောငျ နရေတယျ။ကလေးကို မိခငျနို့တိုကျကြှေးရတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးဆို
မိသားစုဝငျတှနေဲ့ အမြိုးသားကလညျး သူ့ကို သညျးသညျးလှုပျ ဂရုစိုကျတာပေါ့။သူစားခငျြတာ၊ သူဖွဈခငျြတာ အကုနျလုပျပေးတယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအရရော၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအရပါ အားပေးတယျ။သူလုပျရမယျ့ ကလေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အလုပျတှကေို ဝိုငျးကူပေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ တခြို့အမြိုးသမီးတှမှောတော့ ဒီလိုအားပေးကူညီမှုတှေ မရနပေါဘူး။ သူ့အလုပျတှေ သူ့ဟာသူ လုပျရတယျ။ အိမျအလုပျတှလေညျး ဝငျကူရတယျ။ ကလေးဝယြောဝစ်စလညျး သူပဲလုပျရတယျ။ အမြိုးသားက ဒါတှေ သူနဲ့မဆိုငျဘူးလို့ ပွောတယျ။ ပိုကျဆံရှာရမယျ့အလုပျကိုပဲ လုပျတယျ။ ပဲခူးတိုငျး၊ ကြောကျတနျးကြေးရှာအုပျစုထဲက အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ အဖွဈအပကျြကတော့ အဲဒီထကျတောငျ ပိုပါသေးတယျ။တဈရကျမှာ
Win-Win Organization ဆေးကုသနတေဲ့ဆီကို သူ ရောကျလာပါတယျ။ကလေးမှေးပွီးတာ ၁၀ ရကျပဲ ရှိသေးတယျ။ သူ့မိနျးမကိုယျအောကျပိုငျးမှာ အနာဖွဈလို့တဲ့။အဖှဲ့ရဲ့ ဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာ ဆုဇငျဝငျးသနျးက စဈဆေးကွညျ့လိုကျတော့ ကလေးမှေးပွီး ပွနျခြုပျထားတဲ့နရောက ကှဲနတော။ပိုးတှဝေငျပွီး အနံ့အသကျလညျး တျောတျောမကောငျးဘူး။ဒါနဲ့ ပိုးသတျဆေးပေးရုံနဲ့ မရဘဲ ဆေးရုံကိုသှားမှ ဖွဈတော့မယျဆိုတာ သိလိုကျတယျ။အိမျမှာမှေးပွီး သသေခြောခြာ မခြုပျခဲ့လို့ ပိုးဝငျတာလား အထငျနဲ့ မေးလိုကျတော့ အငျမတနျစိတျပကျြအံ့သွရတဲ့ အဖွဈအပကျြတဈခုကို ကွားသိလိုကျရတယျ။
ကလေးမှေးပွီး ၃ ရကျမွောကျနမှေ့ာ သူ့ယောကျြားက အတငျးအကွပျ ဆကျဆံသှားတာတဲ့လေ။သွျော လို့ပဲ အားလုံးက စုပျသတျနိုငျခဲ့တော့တယျ။ လူတှကေ ပွောကွတယျ၊ လငျမယားကွားပါဆိုမှ မုဒိမျးမှုဆိုတာ ဘယျရှိမှာလဲတဲ့။ကာမပိုငျယောကျြားလို့လညျး သုံးနှုနျးကွသေးတော့ အိမျထောငျပွုပွီးသှားရငျ ဒီအမြိုးသမီးရဲ့ကာမကို သူ့ယောကျြားက ပိုငျသှားပွီလို့ ထငျတတျကွတာကိုး။တကယျတော့ မုဒိမျးမှုဆိုတာ လငျမယားဖွဈခွငျး၊ ခဈြသူဖွဈခွငျးနဲ့ မသကျဆိုငျဘဲ ခှငျ့ပွုမပွု ဆိုတဲ့အပျေါပဲ အခွခေံစဉျးစားရတဲ့ အရာမြိုးပါ။
ကလေးမှေးပွီးစ အငျအားခြိနဲ့နတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျကို ဒီလိုပွုမူတာဟာ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ လကျခံနိုငျစရာ မရှိပါဘူး။ဘာကွောငျ့ ဒီလိုလုပျရတယျ ဆိုတာလညျး စဉျးစားလို့တောငျ မရဘူး။အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံကိုလှဲ၊ သှားဖို့ ပိုကျဆံမရှိဘူးဆိုတဲ့အတှကျ ငှကွေေးပါထောကျပံ့ပေးပွီး ပွနျလှတျလိုကျရတယျ။နောကျထပျတဈခါ အဲ့ဒီရှာလေးကို ရောကျတော့ ဒီအမြိုးသမီးအကွောငျး သတိတရမေးတယျ။ဆေးရုံသှားပွပွီး နကေောငျးနပွေီလား ဆိုတော့ ဆုံးသှားရှာပွီ တဲ့။ ဘာလို့လဲ၊ ဆေးရုံအရောကျ နောကျကလြို့လားဆိုတော့ သှားကိုမသှားလိုကျရတာ။
Win-Win နဲ့ တှပွေီ့း သူ အိမျပွနျသှားတယျ။ ဆေးရုံသှားဖို့ လိုကွောငျး အိမျကိုပွောပွပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ယောက်ခမဖွဈသူက Win-Win က ပေးလိုကျတဲ့ ထောကျပံ့ငှကေို သိမျးလိုကျတယျ။ပွီးတော့ နငျ ဆေးရုံသှားစရာ မလိုဘူးတဲ့၊ နငျ ဆေးရုံတကျရငျ အိမျမှာ ကလေးကို ဘယျသူထိနျးမလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြကို ပေးတယျ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဒီလောကျဆိုးဆိုးရှားရှား ပိုးဝငျနတေဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာ ဆေးရုံတောငျ မရောကျလိုကျရဘဲ အိမျမှာတငျ အသကျဆုံးရှုံးလိုကျရတယျ။ဒီလိုအဖွဈအပကျြမြိုးတှေ ဘယျသူသိမှာလဲ။
ဒီလိုနညျးနဲ့ အသကျဆုံးရှုံးနေ၊ ဘဝတှေ ထိခိုကျနရေတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေော ဘယျနှယောကျတောငျ ရှိပွီလဲ။ဒီပွဿနာဟာ အရေးမကွီးဘူးလို့ရော ထငျနကွေတုနျးပါပဲလား။ဒီလိုအနိုငျကငျြ့တဲ့ လုပျရပျမြိုးလုပျပွီး အေးအေးဆေးဆေး နနေလေို့ရော ရတယျတဲ့လား။အမြိုးသမီးတှဟော နှိမျ့ခဆြကျဆံမှုတှေ၊ အကွမျးဖကျမှု၊ အနိုငျကငျြ့မှုတှေ၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စျောကားမှုတှကွေားထဲမှာ ရှငျသနျနရေပါတယျ။ခုလိုအဖွဈအပကျြမြိုးတှေ မွငျနေ တှနေ့ရေပမေယျ့
လူတခြို့ကတော့ မွနျမာနိုငျငံဟာ ကြားမခှဲခွားဆကျဆံမှု မရှိဘူး၊ လငျနဲ့မယားကွားမှာ မုဒိမျးမှုဆိုတာ မရှိဘူးရယျလို့ ခုခြိနျထိ လကျခံနကွေဆဲပဲ။ကာကှယျဖို့မပွောနဲ့၊ ဒီလိုကိစ်စရပျတှေ ရှိနပေါလားဆိုတာကို သိအောငျပဲ အရငျလုပျကွရဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။တကယျတော့ ဒီလိုလူမှုပတျဝနျးကငျြမြိုးမှာ ယောကျြားဖွဈခှငျ့ရတာ အငျမတနျကံကောငျးပါတယျ။
ကလေးမွေးပြီးရင် ၄၅ ရက်တိတိ ယောကျာ်းနဲ့ မနေနဲ့ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ အမျိုးသမီးတွေကို မှာနေကျစကားပေါ့ !!!“ယောကျာ်းဖြစ်ရတာ ကံကောင်းပါတယ်”
‘ကလေးမွေးပြီးရင် ၄၅ ရက်တိတိ ယောကျာ်းနဲ့ မနေနဲ့’ ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ အမျိုးသမီးတွေကို မှာနေကျစကားပေါ့။အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးကို အနားပေးထားတယ်။အင်မတန်မှကို ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးမွေးဖွားမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အားပြန်မွေးရတဲ့ကာလကိုး။သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝအောင် နေရတယ်။ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးဆို
မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အမျိုးသားကလည်း သူ့ကို သည်းသည်းလှုပ် ဂရုစိုက်တာပေါ့။သူစားချင်တာ၊ သူဖြစ်ချင်တာ အကုန်လုပ်ပေးတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ အားပေးတယ်။သူလုပ်ရမယ့် ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေကို ဝိုင်းကူပေးတယ်။
ဒါပေမယ့် တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ ဒီလိုအားပေးကူညီမှုတွေ မရနေပါဘူး။ သူ့အလုပ်တွေ သူ့ဟာသူ လုပ်ရတယ်။ အိမ်အလုပ်တွေလည်း ဝင်ကူရတယ်။ ကလေးဝေယျာဝစ္စလည်း သူပဲလုပ်ရတယ်။ အမျိုးသားက ဒါတွေ သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ပိုက်ဆံရှာရမယ့်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်တယ်။ ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ အဲဒီထက်တောင် ပိုပါသေးတယ်။တစ်ရက်မှာ
Win-Win Organization ဆေးကုသနေတဲ့ဆီကို သူ ရောက်လာပါတယ်။ကလေးမွေးပြီးတာ ၁၀ ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူ့မိန်းမကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ အနာဖြစ်လို့တဲ့။အဖွဲ့ရဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ဆုဇင်ဝင်းသန်းက စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ ကလေးမွေးပြီး ပြန်ချုပ်ထားတဲ့နေရာက ကွဲနေတာ။ပိုးတွေဝင်ပြီး အနံ့အသက်လည်း တော်တော်မကောင်းဘူး။ဒါနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးပေးရုံနဲ့ မရဘဲ ဆေးရုံကိုသွားမှ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။အိမ်မှာမွေးပြီး သေသေချာချာ မချုပ်ခဲ့လို့ ပိုးဝင်တာလား အထင်နဲ့ မေးလိုက်တော့ အင်မတန်စိတ်ပျက်အံ့သြရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ကြားသိလိုက်ရတယ်။
ကလေးမွေးပြီး ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံသွားတာတဲ့လေ။သြော် လို့ပဲ အားလုံးက စုပ်သတ်နိုင်ခဲ့တော့တယ်။ လူတွေက ပြောကြတယ်၊ လင်မယားကြားပါဆိုမှ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ ဘယ်ရှိမှာလဲတဲ့။ကာမပိုင်ယောကျာ်းလို့လည်း သုံးနှုန်းကြသေးတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသွားရင် ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကာမကို သူ့ယောကျာ်းက ပိုင်သွားပြီလို့ ထင်တတ်ကြတာကိုး။တကယ်တော့ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ လင်မယားဖြစ်ခြင်း၊ ချစ်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ ခွင့်ပြုမပြု ဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ အခြေခံစဉ်းစားရတဲ့ အရာမျိုးပါ။
ကလေးမွေးပြီးစ အင်အားချိနဲ့နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဒီလိုပြုမူတာဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာလည်း စဉ်းစားလို့တောင် မရဘူး။အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံကိုလွှဲ၊ သွားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက် ငွေကြေးပါထောက်ပံ့ပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါ အဲ့ဒီရွာလေးကို ရောက်တော့ ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်း သတိတရမေးတယ်။ဆေးရုံသွားပြပြီး နေကောင်းနေပြီလား ဆိုတော့ ဆုံးသွားရှာပြီ တဲ့။ ဘာလို့လဲ၊ ဆေးရုံအရောက် နောက်ကျလို့လားဆိုတော့ သွားကိုမသွားလိုက်ရတာ။
Win-Win နဲ့ တွေ့ပြီး သူ အိမ်ပြန်သွားတယ်။ ဆေးရုံသွားဖို့ လိုကြောင်း အိမ်ကိုပြောပြပြီးတဲ့အချိန်မှာ ယောက္ခမဖြစ်သူက Win-Win က ပေးလိုက်တဲ့ ထောက်ပံ့ငွေကို သိမ်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ နင် ဆေးရုံသွားစရာ မလိုဘူးတဲ့၊ နင် ဆေးရုံတက်ရင် အိမ်မှာ ကလေးကို ဘယ်သူထိန်းမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွား ပိုးဝင်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဆေးရုံတောင် မရောက်လိုက်ရဘဲ အိမ်မှာတင် အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ ဘယ်သူသိမှာလဲ။
ဒီလိုနည်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးနေ၊ ဘဝတွေ ထိခိုက်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရော ဘယ်နှယောက်တောင် ရှိပြီလဲ။ဒီပြဿနာဟာ အရေးမကြီးဘူးလို့ရော ထင်နေကြတုန်းပါပဲလား။ဒီလိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးလုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေနေလို့ရော ရတယ်တဲ့လား။အမျိုးသမီးတွေဟာ နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေကြားထဲမှာ ရှင်သန်နေရပါတယ်။ခုလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ မြင်နေ တွေ့နေရပေမယ့်
လူတချို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိဘူး၊ လင်နဲ့မယားကြားမှာ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ မရှိဘူးရယ်လို့ ခုချိန်ထိ လက်ခံနေကြဆဲပဲ။ကာကွယ်ဖို့မပြောနဲ့၊ ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေ ရှိနေပါလားဆိုတာကို သိအောင်ပဲ အရင်လုပ်ကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ဒီလိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ယောကျာ်းဖြစ်ခွင့်ရတာ အင်မတန်ကံကောင်းပါတယ်။
ဆရာမကွီး ဒျေါမွငျ့မွငျ့စိနျ မကွာခငျ ပွနျလာပါတော့မညျ
ကြောငျးထိုငျဘုနျးကွီး လိုခငျြလို့ အကူအညီတောငျးလာတဲ့ နမ်မတူက ရှာလေး